Ọdụ Ragbọ Mmiri Haydarpaşa. | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌdụ Ragbọ Mmiri Haydarpaşa.
Amaghi banyere haydarpasa gari
Sakalar na Scythians (Ndị Hidden Old Anatolian People) na akaụntụ Twitter, ka ha na-ekerịta ihe ọmụma banyere usoro iwu ihe owuwu nke Haydarpa Stationa Station, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ọrụ mbụ Alaeze Ukwu Ottoman na usoro nke ịhụ mba n'anya kwuru.
Sakalar na Scythians (Ndị Zoro Ezo Old Anatolian) site na ịkekọrịta akaụntụ Twitter dị ka ndị a; ”Haydarpaşa ọdụ ụgbọ okporo, 4760 km Hicaz Railways project, nke bu akara mbu nke 91 km Haydarpaşa-Izmit ka mmalite nke afọ 2 1873 na-arụ ọrụ. Nna nke echiche nke oru ngo a bụ German Injinia Wilhem Von Pressel. Sultan Abdulaziz wetara Pressel na General Directorate of Asia Ottoman Railways. (1872) A rụrụ ngo a site na ibe n’agbata afọ 1901-1908 na Damascus-Hejaz (Hijaz: mpaghara ọdịda anyanwụ nke Saudi Arabia, tinyere Mak, Medina na Taif).
Mgbe ekwuputara na a ga-enye onyinye ndị ahụ, ha buru ụzọ kwuo na ọrụ Mega a, ọkachasị ndị France na ndị ,tali na-agaghị eme ya nakwa na Alaeze Ottoman ga-alụso ndị Alakụba. Ọbụna ndị Alakụba nke Morocco na Egypt ekweghị na ọrụ ahụ ma nwee obi abụọ.
Onyinye onyinye mbu bu peni 75.000. Akwa Vizier mere onyinye a. Sultan II. Mgbe Abdülhamid na ndị ọrụ ala nke oge ahụ jiri onyinye mbụ wee malite ọrụ ahụ, ndị Alakụba nọ na Egypt, Morocco, India na Russia gbakwara onyinye. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile dị n'Ijipt nwere onyinye enyemaka…
Ma ọzọ; na mbu ego izizi na oru a bu ego nke 100.000 lira nke Ziraat Bank. Afọ abụọ mbụ ka aga-enyerịtara ego nke puku pound nke 50 n'ime afọ ndị na-esote. Yabụ ruo na njedebe nke afọ 1908 480 enyela puku kwuru puku otuto. Ebe ọnọdụ a nwere mmetụta na-adịghị mma na mbinye ego ahụ, Ziraat Bank gbaziri ego site na Ottoman Bank. Ebumnuche nke oru ngo a, nke malitere site na ọdụ ụgbọ okporo Haydarpaşa na Hijaz, wee ruo Basra, bụ ime ka akụrụngwa obodo na onyinye obodo na-enyeghị onyinye na steeti ndị si mba ọzọ.
Ka oru ngo a na-aga n'ihu wee bịaruo Hejaz, ndị Britain enweghị nsogbu site na itinye ego na ebo Bedouin wee buso ụgbọ okporo ígwè ahụ. Ebe ndị Bedouins jikọrọ aka wee buso ọgụ na nke mbụ na akụkọ ihe mere eme, iji ihe agha na 15 puku ndị agha nwere ike ịga naanị. Agbụrụ ndị Bedouin na-enye agha agha zuru ezu, ndị agha sonyere ndị agha ubi agha, ọtụtụ ndị agha nwụkwara. Ọnọdụ ahụ bịara bụrụ nke enyere ndị ọrụ ahụ egbe, mana anyị na ndị agha na-arụ ọrụ a n'ihi ụjọ na-agba ọsọ na ndị ọrụ.
Site na ndị agha ndị agha na-arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ, ọnụahịa ahụ belatara ọkara ma ndị ụlọ ọrụ Europe zuru nde 3.5. Nde 1.7 nke ihe owuwu a na aka oru ya na ihe ndi ozo. bu mmefu. (Ottoman mmefu ego n'oge a bu nde 18)
Mkpuchi Bedouin bụ ndị Bedouin ka ịgbatịkwu ọrụ ahụ, yana ọrụ ndị enyere ikike, a kwụsịrị mwakpo ndị ahụ, ruo mgbe 1916 chịrị nnukwu Hejaz Nnupụisi nye Onye Ọchịchị Britain nke Mecca Sherif Hussein! (323 kilomita n'etiti El Ula na Medina 1 mepere na Septemba 1908 na ememe gọọmentị)
N'ime oru ngo mega; 2666 zuru oke nwere akwa mmiri agbakwunyere na akwa. ọzọ; Nnukwu ígwè 7, ọdọ mmiri ọka 7, ọdọ mmiri ọka 9, ụlọ ọrụ 3 dị na Haifa, Der na Maan, na nnukwu ụlọ ọrụ dị na Kadem ebe a na-arụzi ọdụ ụgbọ ala na ụgbọ ala. Ma ọzọ; NUMlọ ahịa ndozi 1 na Medina, onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ na Haifa, nnukwu ọdụ, ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-ewu ụlọ, ụlọ ndị ọrụ, ụlọ ọkpọkọ na ụlọ ọrụ.
Hotellọ oriri na ọ Maụ hotelụ na Maan, ụlọ ọgwụ dị na Tebuk na Maan, ụlọ oriri na ọ'aụ inụ na Der'a na Semah, na ebe nchekwa mmiri 37 dị na ebe dị iche iche n'oge oge njem njem, ụgbọ elu atọ dị n'etiti Damaskọs na Medina. idọba-oriọna; na Mọnde, Wenezde, Sọnde n’agbata 07.00 na 10.00, na etiti ehihie, 13.00 pụtakwara. Ọ na-apụ na Madiina n'otu oge Tuesday, Tọzdee na Fraịde.
N’oge njem ahụ, a na-enye ndị njem ala mmụọ dara ogbenye na ndị nwere mkpa njem ụgbọ oloko na-akwụghị ụgwọ. Na mbu, uzo Damaskọs-Medina ji ebu ndi 40 kwa ubochi, mgbe uzo Hicaz gbadara 72. Ọzọ n'ọrụ a mega, naanị ụmụ amaala Ottoman bụ ndị ọrụ. ”
Neden Ka m kọwaa ihe kpatara ejiri Hicaz Railways jiri isi obodo, onyinye na ndị agha. Otu n'ime isi ebumnuche na -eme ka amachibidoro nkwenye ụgbọ ala enyere ndị Britain na French, emesia nke ndị German dị ka ihe mmezi, bụ ịhapụ iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị Ottom kemgbe 1878. Ọzọ, 1882 bụ mwakpo ndị Britain wakporo Egypt. Agbanyeghị na anyị hapụrụ Saịprọs gaa England tupu nkwekọrịta Berlin, ha esoghị anyị na ndị Russia. Ndi agha France nke 1881'de nke di na Tunisia, nnabata nke ndi Britain, mwakpo nke ndi olu nke ndi France na obodo Ottoman muta onodu a ma duru ndi ochichi obodo. Ndị German bụ ndị kpalitere Russia, England na France n'oge ahụ.
II. Abdulhamid ziri ezi ịgakwuru ndị Germany. N'ihi na ndị Germany, dị ka mba ndị ọzọ, enweghị anya ala nke Alaeze Ottoman m. Ọzọkwa, dị ka ndị Britain + French + Russia achọghị ikwekọrịta n'etiti ha ka ha bibie ndị Ottom. Ndị Russia mere ka o doo anya site na nkwekọrịta 1770 Çeşme na Nkwekọrịta 1774 Küçük Kaynarca. Ọzọkwa, ọ zubere ibibi ndị agha na Navarin (1827) na SYNOP Raids (1853). Ọ bụ ihe nwute, ha nwere ihe ịga nke ọma na nke a. Site na Nkwekọrịta nke Küçük Kaynarca, ndị Ottom meriri nkwado nke ndị Ọtọdọks ma ndị Ottom meriri nkwado nke ndị Alakụba na Russia.
Site na nkwekọrịta Küçük Kaynarca a, e guzobere ụdị Caliphate. (Sultan I. Abdulhamid oge-1774) A mụrụ Caliphate na oge ikpeazụ nke ụlọ ọrụ Ottoman Caliphate ejiri mụọ a. Asịrị na-ekwu banyere caliphate banyere Yavuz Sultan Selim abụghị eziokwu.
Ugbu a, gịnị kpatara m dere ihe a? Ọdụ ilgbọ Mmiri Haydarpaşa bụ ọrụ izizi obodo mbụ emere na alaeze ukwu nke Ottoman, nke m kpọtụrụ aha n’elu, mgbe ogologo oge nke ahụmịhe na ịlaghachi na nghọta mba. Ka ị na-eme oru ngo a ka ọ bụrụ ihe ngosi nke Istanbul ma na-eme ya anya njem dị ka ellọ Eiffel nke Paris, eziokwu na ọ bụ ụlọ ọrụ binye aka na-edeghị aha na-enye mba ahụ akọ na uche. Atumatu oru ngo a bụ ma IMM, nakwa dị ka ma na gburugburu ebe obibi reclamation nke Ministry of Tourism imekọ ihe ọnụ na-mkpa na-adọ aka ná ntị Turkey kpakpando n'ime ihe ndị mere m ka kpọtụrụ aha. "
Ndị ọka iwu nke Haydarpaşa na Sirkeci Station Tenders…
Ogige okporo ụzọ Dalaman
A na-agbanwe ọdụ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa na YHT Railway Station
Citizensmụ amaala nke Bursa chọrọ ụgbọ oloko ngwa ngwa, mana dịka obodo…